Chelmo - B သွေးမိန်းကလေးတွေရဲ့ အားသာချက်လေးများ
B သွေးမိန်းကလေးတွေရဲ့ အားသာချက်လေးများ
B သွေးမိန်းကလေးတွေကတော့ နားလည်ရခက်တယ်ဆိုတာကို သိပြီးဖြစ်မှာပါ။
ဒါပင်မယ့်လည်း သူတို့အကြောင်းကို သေသေချာချာနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ချစ်ဖို့ကောင်းလာမှာပါ။ သူတို့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အလိုက်သင့်မနေတာကြောင့် နားလည်ရခက်ပင်မယ့်လည်း အတွင်းစိတ်ကတော့ ဘယ်တော့မဆို ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူးကို မှန်မှန် ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကြောင့် ပေါင်းသင်းရလွယ်မှာပါ။
သူတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကို နားလည်ထားမယ်ဆိုရင် သူအနားကို လွယ်လွယ်နဲ့ ချဉ်းကပ်နိုင်မှာပါ။
၀၁. သူ့ရေချိန်လည်း ရှိတယ်
ပတ်ဝန်းကျင်က ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်၊ ကမ္ဘာပဲပျက်ပျက် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကို အေးအေးဆေးဆေး ဆက်လုပ်နေတတ်သူပါ။ သူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က တထပ်တည်းမကျလို့တွေးထားသလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားလာရတာကို မုန်းတယ်။ ပိတ်ရက်တွေမှာ အိမ်မှာ တယောက်တည်းနေရတာကို သဘောကျသူပါ။
၀၂. ကိုယ့်သာလျှင် ပထမ
ကိုယ့်အတွက်ကိုသာ ပထမနေရာထားလေ့ရှိတာကြောင့် ဒီလိုထင်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောတတ်သူပါ။ အဝတ်အစားဆိုရင်လည်း ကိုယ်ဝတ်တာကို ပေါ်လွင်စေချင်တာကြောင့် သူများနဲ့မတူတာကို ဝတ်တတ်ပါတယ်။
သိတတ်စအရွယ်ကနေ ကိုယ့်ရဲ့အတွေး၊ကိုယ့်ရဲ့နေရာလေးမှာ လုပ်ချင်တာတွေကို လုပ်ခဲ့မှာပါ။ သူတို့ရဲ့စဉ်းစာပုံလေးတွေက ဒါကြောင့်ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ထူးခြားနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းလေးတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
၀၄. ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက ထူးဆန်းနေတတ်တယ်
သူကလိုချင်တာရှိရင် ချက်ချင်းဆိုသလို ရကိုရမှကျေနပ်တယ်။ မကြိုက်တာတွေကိုတော့ လှည့်ကိုမကြည့်တတ်ပါ။
အကယ်၍ ရန်ဖြစ်ရင်တောင် နောက်နေ့မှာတော့ ဘာမှမဖြစ်ထားသလိုပါပဲ။ သူ့ခေါင်းထဲမှာ အမြဲအကောင်းဘက်ကနေတွေးတတ်သူပါ။ စိတ်ဆိုးနေတာကို မေ့သွားတတ်သူပါ။ ရန်ဖြစ်ရင်တောင် မောလာပြီး သူ့ဘက်ကနေ တော်တော့ လို့ပြောလာတတ်သူပါ။
၀၆. အဖြု၊အမဲ ပြတ်သားသူ
သူကတော့ ပြတ်သားသူတစ်ယောက်ပါ။ အခြားသူအတွက် ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုရင် ဘာကိုမှ မလုပ်ချင်ပါ။ အကယ်၍ ကိုယ်က ကြိုက်နေရသူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူဘာတွေကိုပဲပြောပြောလုပ်ပေးမယ့်သူပါ။
၀၇. ချက်ချင်းဆိုသလို ကောက်လုပ်တတ်သူပါ
လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးကို တွေးပြီး စိတ်ရှုပ်နေတတ်သူမဟုတ်ပါ။ လုပ်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဆိုသလို ကောက်လုပ်နိုင်သူပါ။ဒါကြောင့် အလုပ်မှာလည်း ဦးဆောင်သူများပါတယ်။
၀၈. ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုရင်လည်း ချက်ချင်းပါ
မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးထားရင်လည်း ချက်ချင်းဆိုသလို ရပ်ပြီး နောက်တခုကို လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကျင့်လေးရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲအချိန်တွေကုန်ခဲ့ပင်မယ့်လည်း မမှုပါ။
သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်လေးတွေရှိရင် အတွေးတွေဝင်လာရင်ချက်ချင်းကောက်လုပ်လိုက်ပင်မယ့်လည်း ပျင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ လှည့်ကို မကြည့်တတ်ပါ။
၁၀. ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတယ်
ကိုယ့်ရဲ့နေရာလေးမှာ အမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်သူပါ။ သူဘဝလေးကိုနှောက်ယှက်ခံရပြီဆိုရင်တော့ အရမ်းကို စိတ်ထိခိုက်လွယ်သူပါ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျလွယ်သူပါ။
သူကတော့ နည်းနည်းထူးဆန်းနေတတ်တာကြောင့် သူ့ကို ချဉ်းကပ်ချင်သူကတော့ သူအကြောင်းလေးကို ဦးစွာလေ့လာဖို့တော့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။